Khudbad Sannadeedka Dastuuriga ahEe Madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland Mudane, Muuse Biix Cabdi 18 February 2020 | Warsugan News
Home Wararka Khudbad Sannadeedka Dastuuriga ahEe Madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland Mudane, Muuse Biix Cabdi 18...
Hal-beega Cabirka Dhaqaalaha (GDP) ee JSL waxa uu kordhay 2% labadii sanno ee ugu dambeeyey. Halka koboca dhaqaalaha Qaaradda Afrika ay Qaramada Midoobay ku qiyaastay sannadkii 2019-ka 4%. Taas oo muujinaysa in Somaliland koboceeda dhaqaale uu kordhayo, iyada oo ay jiraan caqabado dhaqaale oo u gaar ah Jamhuuriyadda Somaliland.
Dakhliga dalku waxa uu ka kor-maray odoroskii miisaaniyadda sannadka 2019-ka 5%. Taas oo muujinaysa dadaalka iyo awooda hay’adaha dakhli ururinta Qaranka.
Waxa 7 Cagaf la guddoonsiiyey Iskaashatooyinka beeraha magaalooyinka Beerato iyo Beer ee Gobollada Daad-madheedh iyo
Waxa 4,750 Mitir oo tuunbooyin ah iyo 85 Mishiinnada Biyaha ah la guddoonsiiyey 170 Qoys oo kala jooga Gobollada Dalka.
Waxa cuduro kala duwan laga tallaalay 3 million oo neef oo xoolo ah, waxaana ka qayb galay 38 kooxood oo ah hawl-wadeenada caafimaadka Xoolaha ah.
Waxa dhawaan la bilaabi doonaa dhismaha 5 KM oo waddo ah oo qayb ka ah Marinka Dhaqaalaha ee Berbera Corridor, oo ka leexan doona Magaalada Hargeysa, si culayska iyo samxadda gaadiidka xamuulka ah looga yareeyo Caasimadda Dalka.
Waddada Burco – Ceerigaabo waxa la dhisay 107 Km intii Xukuumaddani xilka haysay, waxaana hore u dhisnaa 94 Km, oo isku noqonaya 201 KM.
Xukuumaddu waxa ay ku dhawaaqday hirgalinta Sanduuqa Horumarinta Dhallinyarada JSL. Waxa uu noqon doonaa Sanduuq Dhallinyaro oo madax-bannaan oo si rasmi ah uga hawl-gala dalka, si loogu sahlo dhallinyarada leh hal-abuurka iyo curinta ganacsi ee u baahan taageero dhaqaale oo aan lahayn dul-saar. Waxa aannu ka codsanaynaa ganacsatada JSL in ay ka qayb-galaan dhaqaalaha Sanduuqa Dhallinyarada, isla markaana Xukuumad ahaan waxaanu ku shubi doonaa dhaqaale joogto ah sannad kasta, haddana waxaanu ku shubnay $200,000 Doollar ee ugu horreeyey.
Iyada oo laga jawaabayo baahida Ciidamada Qaranka iyo Shaqaalaha Dawladdu u qabaan in ay helaan dhul ay dagaan, waxa Xukuumaddu go’aan ku soo saartay in dhulka Danta Guud ah qayb laxaad leh looga diyaariyo Ciidamada Qalabka-sida iyo Shaqaalaha Dawladda
Waxa agab iyo raashin la gaadhsiiyey 28,200 oo qoys oo ku barakacay abaaraha sannadihii hore.
Previous article Booliiska oo Gacanta ku Dhigay Nin Kufsi iyo Dil u Geystay Gabadh yar
Next articleJamhuuriyadda Somaliland waxay kula midowday Soomaaliya hal shardi oo kaliya. Kaas oo ah in la helo shantii Soomaaliyeed oo midowda. Taasna 31 sanno oo la raadinayey, waa la waayey + SAwiro